Kutsvaga Visio ... aka ... Vanhu Vanoshamisika Nei ndiri paMac | Martech Zone
Kutsvaga Visio… aka… Vanhu Vanoshamisika Nei ndiri paMac
NeChishanu, Kurume 28, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vanhu vanonetseka kuti sei ndisingashandise Microsoft zvakanyanya sezvandaive nazvo munguva yakapfuura. Vamwe vanhu vanofunga iyo yose PC / Mac chinhu chinongova chiseko. Ndakafunga iyo PC maringe neMac chinhu chaingova chiseko, futi. Zviri kwete. Ndanga ndiri paMac ikozvino zviri pamutemo gore rimwe.
Uye ini ndakaparara.
Chinhu chakaipisisa nezvekushanda paMac ndiko kushanda paPC futi. Ndinozviita mazuva ese kubasa. Ini ndichangobva kutakura Vista (ichiri bluescreen mushure mehope) uye ndaida kurodha pasi nekudzorera Microsoft Visio Standard Edition. Nyore, handiti? Ndakaitenga kubva kuMicrosoft online saka ndichangoenda kunotora zvakare, ndobva ndaiisazve.
Ndinoenda kunzvimbo inonzwisisika, Microsoft Download Center. Iko kune yeSilverlight beta beta yeMicrosoft Download Center saka ndinozvitsvaga! Ini ndinongonyora "Visio" mune "yekutsvaga kurodha pasi" munda. Hezvino izvo zvinouya kutanga nemhedzisiro 119:
Ndeipi yekutanga mhedzisiro mhedzisiro? Kwete Visio zvachose… ndiyo 2007 Microsoft Office Wedzera-mu: Microsoft Sevha sePDF kana XPS. Huh? (Ini handisi kuzomboedza kufunga kuti nei mhedzisiro yekutanga yaive chinzvimbo # 31). Nekudaro, ini ndinoverenga uye kurongedza uye kuverenga uye kurongedza uye kuwedzera uye kuratidza zana mhedzisiro… handisi kuwana Visio chero kupi… vangori vamwe vaoni neboka rechimwe tsvina.
Enda kunzvimbo yeHofisi! Sezvo ini ndakatenga Visio pamhepo, ndakafunga kuti ndinokwanisa kudzokera kuchitoro kuburikidza neMicrosoft. Ini ndinotsvanzvadzira zvishoma, asi ndinozviwana… Visio Standard Edition. Uye padivi reruboshwe ... Zvakatengwa Kare! Yahoo !!!!… er… ndinoreva Wahooo !!! Ini ndinodzvanya Kwakapfuura Kutenga uye nhamba yangu yeinvoice inobuda. Hongu !!!! Almost there !!!! Ini ndinodzvanya pakutenga uye izvi ndizvo zvandinowana:
Ouch. Ndiri kushandisa Internet Explorer 7 nyangwe… ndisingatomboise njodzi iyi paFirefox. Ndinobvisa makuki angu. Ini ndinodzokera kumashure, tinya pane invoice yangu… uye….
Iwe unoyamwa Microsoft! On uye off web ... iwe kuyamwa! Iye zvino handikwanise kuita kuti chirongwa changu chiitwe nhasi ne software ndanyadziswa nekuti wakandiita kuti ndiwedzere izvo zvakandibhadharira imwe $ 150 yandisingakwanise kurodha pasi uye yandisingakwanise kushandisa.
Vanhu vanoshamisika chaizvo kuti nei ndiri paMac.
Hazvishamise kuti nei Microsoft Brand iri kudzikira. Ndingazoshamisika kuziva kuti kana vashandi veMicrosoft vaifanira kunyange kushandisa zvigadzirwa zvavo, online kana isipo.
Nekuti chete Unogona…
Mar 28, 2008 pa 4: 05 PM
Ehe, ndiri kurwara neM$ crap futi. Nguva pfupi yadarika ndakasvetuka ngarava paOutlook 07 ndikaenda kuMozillas Thunderbird. Zvakare tichaisa hofisi yakavhurika munguva pfupi iri kutevera kubvisa mamwe maM$ marara emuhofisi.
Kunyatsofunga kugadzira kusvetuka uye kusashandisa chimwe chinhu kunze kwelinux pamakina angu izvozvi. Yakave yakanyanya mushandisi hushamwari seyanonoka uye yakawanda winblows software ine linux inoenderana imwe nzira mazuva ano.
Handina chokwadi Kana ndakashinga kuwana mac tho.
Mar 28, 2008 pa 5: 36 PM
Chiroto chinotyisa sei!!! Microsh*te! Kana isu vanhu tichidzidza…. Microsoft ichave iri mudambudziko REAL apo nharaunda yemakambani inongoerekana yaona kuti ichachengetedza nguva nemari kana vachinja kuMac vomira kushandisa zvigadzirwa zveMicrosoft.
Mar 28, 2008 pa 7: 57 PM
Uye zvakadaro, pandinoverenga pasi chinyorwa, yako Google Ads link pazasi pekupinda kwako ine zvinongedzo zvekutenga Hofisi 2003 uye 2007.
Uye Mac ads padivi, yakasanganiswa nedzimwe Hofisi wedzera ins.
Dzimwe nguva zvinonakidza chaizvo kuti otomatiki kodhi yekushambadzira inogona kubuda panguva dzinonakidza. Yako post yakasanganiswa neye "panguva" ads yakaita manheru angu 🙂
Mar 28, 2008 pa 8: 32 PM
Ha! Ndizvo zvinogara zvichiratidzika kunge zvakadaro, Bob! Pese pandinoridza munhu, kushambadzira kwavo kunopera panzvimbo. Kunyanya kusetsa.
Mar 29, 2008 pa 1: 08 AM
Vhura Hofisi iri pano 2.4 uye 3.0 ichave nhanho imwe nani. Kune zvakare mawedzero kuitira kuti munhu ashandise LaTeX mairi mazuvano…
Mar 29, 2008 pa 12: 23 PM
Ingoshandisa OmniGraffle Pro. Visio ndeye bloat-tastic zvakadaro.
Apr 1, 2008 pa 1: 38 PM
Ndakave nerombo rakanaka neOmniGraffle Pro zvakare, Jason. Ndinoshuva kuti dai yakazara faira-inoenderana neVisio (kana vice-versa), zvakadaro! Ndine vatengi vanoshandisa Visio.
Mar 29, 2008 pa 2: 36 PM
Munoziva Mac yaisazonyanya kushata dai pasina vanhu vese veMac." 😉
Apr 1, 2008 pa 1: 39 PM
Ha! Wataura chokwadi Mike. Isu tiri boka rinopenga - kunyanya vanhu vakaita seni vaive vakadzama muMS tekinoroji kwemakumi maviri emakore apfuura!
Apr 1, 2008 pa 12: 53 PM
Ndave nematambudziko mashoma nezvigadzirwa zveMicrosoft. Ah, ndave nematambudziko akawanda online, asi hapana chakakosha. Nekuda kwekusavimbika kwakawanda kweInternet, ndinosarudza kuva nemakopi akaoma ezvirongwa zvese zvandinotenga, kunyanya kana zvichidhura. Chikoro chekare, ndinoziva.
Zvinoshamisa, asi ndave nematambudziko akawanda neMacs neLinux kupfuura neWindows, uye mapurogiramu akavhurika sosi haamboita seanoshanda neni. Hazvisi zvekushaikwa kwehunyanzvi hwekuziva (ndanga ndichishandisa makomputa kubvira mazuva eDOS).
Zvakare, sei vanhu vachitsiva mavara kana vachinyora "Microsoft"? Ndinoreva, hazvisi sekunge kunyatsozviperetera kuchawedzera neimwe nzira simba raBill Gates rekutonga nyika. Zvinongoratidzika kupusa.
Apr 1, 2008 pa 1: 48 PM
Iyi post yaive hombe hombe vent pamusoro pekushushikana kwangu nesaiti yavo. Ini ndinofunga chinongedzo ndechekuti Microsoft yakambodamburwa nevashandisi vavo. Nyaya yangu yanga isiri yesoftware (ino nguva;), yaive nezvebasa revatengi.
Kwenguva yose yandinorangarira, zvagara zvakadaro. Microsoft yanga isingasvikike uye yakaraira gwara… zvinhu zvakaita sekuva nebrowser isingashandisi zviyero, kuvaka mamodheru ekuchengetedza aingoshanda neMicrosoft-based application, nekuregeredza mamwe mazinga - senge zvinyorwa zvinyorwa.
Ndine ruremekedzo rukuru kune zvavakawana, asi ndinotenda kuti ruvengo rwavo kune chero ani zvake ari munzvimbo iri kuwana zvakanakisisa kwavari. Imwe yekutarisa vhidhiyo yaSteve Ballmer inondiperetera ini!
Musandifungire zvisizvo, Mabasa ane zvaanodawo. Iye jackass kana iwe ukaverenga ichangoburwa Wired magazini. Asi ndinofunga kuti kutarisisa kwake kuri nani pakuchinja mamiriro ezvinhu uye kuyedza kuita kuti zvinhu zvive nyore uye zvitaridzike zve'cult' yake.
Apr 14, 2008 pa 4: 59 PM
Chinongori chinyorwa, Microsoft yakateedzera email ine chekuita nekurodha kwangu nhasi, 4/14/2008 ine chinongedzo chekurodha uye kiyi yechigadzirwa chekuisa.